``ယဉ်ကျေးပျူငှာ ရွှေနံ့သာမှ လှိုက်လှဲစွာ ကြိုဆိုပါ၏´´
ဆရာတော်များ ယခုကဲ့သို့ လမ်းမှာပဲ ဆွမ်းဘုဉ်းပေးကြရသည်
ယနေ့ စစ်ကိုင်းတိုင်း၊ မုံရွာခရိုင်၊ ပုလဲမြို့နယ်၊ ယင်းမာပင်မြို့နယ်အတွင်းရှိ ရွာပေါင်း(၆ဝ)ကျော် လူဦးရေ (၅)သောင်းကျော် မှီခိုပြီး အလောင်းတော်ကဿပဘုရားဖူးသွားရာ ပင်မလမ်းဖြစ်သော လယ်ငေါက်- ချင်ပြစ် ရွှေဆံပင်တံတားလမ်းအတွက် ရန်ကုန်မြို့ စေတနာရှင်များရဲ့ ပထမအကြိမ် ရွှေဆံပင်လှူဒါန်းပွဲကို ရောက်လာကြတဲ့ ဆွေတော်မျိုးတော်အပေါင်းတို့ ကိုယ်ရောစိတ်ပါချမ်းသာကြပါစေလို့ ရှေးဦးစွာ နှုတ်ခွန်းဆက်သပါတယ်။
ဦးဇဉ်းအနေနဲ့ အားလုံးစိတ်ဝင်းစားနေကြတဲ့ ရွှေဆံပင်တံတားလမ်းဖြစ်ပေါ်လာပုံကို သဒ္ဓါ,စေတနာပွားများ နိုင်ကြဖို့ အကျဉ်းမျှပြောကြားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။တကယ်တော့ ရွှေဆံပင်တံတားလမ်းဆိုတဲ့အမည်ဟာ မမျှော် လင့်တဲ့ဖြစ်ရပ်လေးကနေ မထင်မှတ်ဘဲ ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တယ်လို့ ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ရွှေဆံပင်အကြောင်း ပြောရရင် ဒီလမ်းကြီးစတင်လုပ်ခဲ့ပုံကနေ ပြောမှပြည့်စုံပါလိမ့်မယ်။
တကယ်တော့ ဦးဇဉ်းအနေနဲ့ ဒီလမ်းကြီးကို စတင်ဆောင်ရွက်နေတာ (၃)နှစ်နီးနီးရှိခဲ့ပါပြီ၊ စိတ်ကူး ထည့်ခဲ့ တာကတော့ (၁ဝ)နှစ်နီးနီးရှိခဲ့ပါပြီ၊ ဘာကြောင့်စိတ်ကူးခဲ့သလဲဆိုရင် လွန်ခဲ့တဲ့(၁ဝ)နှစ်လောက်က ဦးဇဉ်းတို့ရဲ့ ဇာတိရွာရှိတဲ့ ဒီဒေသကို ကိစ္စတစ်ခုနဲ့ကြွရောက်ခဲ့ပြီး အပြန်မှာ ဦးဇဉ်းစီးတဲ့လိုင်းကားနဲ့အတူ အသက်(၂ဝ) လောက်ပဲရှိသေးတဲ့ ဗိုက်နာနေတဲ့မိန်းကလေးလူနာတစ်ယောက် ဆေးရုံတက်ဖို့ ပါလာခဲ့ပါတယ်၊ ဆေးရုံနဲ့(၁ဝ)မိုင် ကျော်လောက်ပဲဝေးပေမယ့် လမ်းကမကောင်းလို့ (၃)နာရီလောက်မောင်းတာတောင် ဆေးရုံကိုမရာက်သေးပါဘူး၊ ဒါပေမဲ့ လူနာမိန်းကလေးရဲ့အခြေအနေ ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ အသက်မရှိရှာတော့ဘူး။ ဦးဇဉ်းရဲ့မျက်စိရှေ့မှာ မသေသင့်ဘဲသေသွားခဲ့ရပြီး ဆေးရုံကို အချိန်မှီမရောက်နိုင်ခဲ့တာဟာ လမ်းမကောင်းလို့ဘဲလို့တွက်ပြီး၊ ငါဆောင်ရွက် နိုင်ခဲ့ရင် ဒီလမ်းကြီးပြင်နိုင်အောင် ကြိုးစားမယ်လို့စိတ်ကူးခဲ့ပါတယ်။ ဒီအဖြစ်အပျက်မျိုးတွေ ဒီလမ်းပေါ်မှာ မကြာခဏ ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာလည်း သိနေရပါတယ်။
ဦးဇဉ်း မင်းကွန်းတိပိဋကနိကာယကျောင်းတိုက်မှာ တိပိဋကစာကျက်သီတင်းသုံးနေတဲ့အချိန်မှာ ဆရာသမား များဖြစ်တဲ့ မင်းကွန်းတိပိဋကဆရာတော်များဟာ စစ်ကိုင်းနဲ့မင်းကွန်းလမ်းကို ကတ္တရာလမ်းအဖြစ်ဖောက်လုပ်ကြလို့ ဘုရားဖူးတွေ ဒေသခံတွေ အဆင်ပြေချမ်းသာကြတာ တွေ့မြင်ပြီးတော့လည်း ဒီလမ်းကြီးကို ပြင်ချင်စ်ိတ် တွေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
ဒါနဲ့ တိပိဋကစာကို ဆက်မလုပ်နိုင်တာအတူတူ အကျိုးရှိတာလုပ်မယ်ဆိုပြီးဒီလမ်းကြီးကို ပြင်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီး (၂ဝဝ၆ခု၁၂)လပိုင်းမှာ ဆရာတော်ကြီးများရဲ့ သြဝါဒခံပြီး ပတ်ဝန်းကျင်ကျေးရွာ ပေါင်း(၆ဝ) ကျော်မှဆရာတော်များ၊ သက်ဆိုင်ရာ မ.ယ.က၊ ရ.ယ.ကများဖိတ်ပြီး ပုလဲမြို့နယ် ရွာနောင်ရွာမှာ အစည်းအဝေး စခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီအစည်းအဝေးမှာပဲ ကျေးရွာဆရာတော် (၈ဝ)ကျော်တို့က တစ်ပါး(၅)သောင်းကျပ်စီ လှူမယ်ဆိုပြီး အားပေးကြတဲ့အတွက် ဒီလမ်းကြီးရဲ့ ပထမဦးဆုံးအလှူရှင်တွေဟာ ဆရာတော်များဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
ဦးဇဉ်းလည်းရွာပေါင်း(၆ဝ)ကျော်ကို လှည့်လည်ပြီး စည်းရုံးလိုက်တဲ့အခါ ပထမတော့ အတော်မလွယ် ကူခဲ့ပါဘူး။ လမ်းကြီးကောင်းချင်ပေမယ့် သိန်းရာထောင်ချီပြီး ကုန်ကျမယ့်ကိစ္စဆိုတော့ အားလုံးကဝန်လေး နေကြ ပါတယ်။ မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့လည်း ထင်နေကြပါတယ်။
ဒါ့ကြောင့် ဦးဇဉ်းစိတ်ကူးနဲ့ အားလုံးလှူနိုင်မယ့် ပုံစံတစ်ခု အစီစဉ်ဆွဲခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒါကတော့ တစ်ရွာဝင်တစ်ရွာထွက် လှည့်လည်ပြီး စားဝတ်နေရေး အခက်ခဲရှိလျှင် မလှူကြပါနဲ့၊ ဒါပေမယ့် အိမ်တိုင်းအိမ်တိုင်းမှာ နေ့စဉ်အလေအလွင့် ရှိတာလေးတွေ ရှိပါတယ်။ ဥပမာ ကွမ်းယာဖိုးလေးတွေ၊ မုန့်ဖိုးလေးတွေ ချွေတာပေးကြပါ။ တစ်ရာတတ်နိုင်သူကတစ်ရာ ငါးဆယ်တတ်နိုင် သူကငါးဆယ် ချွေတာပါ။ အနည်းဆုံး နှစ်ဆယ်လောက် မုန့်တစ်ခု,အကြော်တစ်ခုဖိုး ချွေတာနိုင်ရင်လည်း မနည်းပါဘူး။ ဒီလမ်းကြီးအတွက် နေ့စဉ်ချွေတာကြပါလို့ စည်းရုံးလိုက်ပါတယ်။
ရွှေဆံပင်တံတား တည်ဆောက်မည့် ချောက်ရိုးနေရာ
တစ်နှစ်ကြာတဲ့အခါမှာ တစ်ရာစုသူက (၃၆၅ဝဝ)ကျပ်၊ အနည်းဆုံး(၂ဝိ)စုသူက (၇၂ဝဝ)ကျပ်လောက်လှူနိုင်ပြီး၊ တစ်နှစ်ပြည့်တဲ့အခါမှာ (၁ဝဝ)စု (၅ဝ)စု ငွေလေးတွေက ဘယ်သူမှ မပင်ပန်းဘဲနဲ့ သိန်း(၃ဝဝ)ကျော် (၄ဝဝ)နီးပါး စုဆောင်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်၊။
(၂ဝဝ၇)ခုနှစ်ကုန်ခါနီးမှာ စစ်ကိုင်းတိုင်း တိုင်းမှူး ဗိုလ်ချုပ်မြင့်စိုးကိုဖိတ်ပြီး အကူအညီတောင်းတဲ့အခါ တိုင်းမှူးက ဝမ်းသာစွာနဲ့ လိုအပ်တဲ့စက်ယန္တယားတွေ ကူညီပေးလို့ အချိန်တိုအတွင်းမှာ အကောင်အထည် ဖော်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ တိုင်းမှူးက အခါအားလျော်စွာ လိုအပ်သလို ပံ့ပိုးပြီး ဆက်သွယ်ရေးအဆင်ပြေဖို့ ဖုံးတစ်လုံးလဲ ကူညီထားပါတယ်။
(၂ဝဝ၇၊ ဝ၈)နှစ်နှစ်လုံး တစ်ဖက်ကလမ်းတံတားတွေလုပ်ရင်း တစ်ဖက်ကလည်း ဦးဇဉ်းနည်းနဲ့ လှည့်လည် စည်းရုံးခဲ့တာ (၂)နှစ်အတွင်း သိန်း(၈)ရာကျော်အထိ ရရှိခဲ့ပါတယ်။
(၂ဝဝ၉)ခုနှစ်ရောက်တဲ့အခါမှာ တစ်ကမ္ဘာလုံးစီးပွားရေးကြပ်တည်းကြတာ ဒီနယ်မြေမှာလည်း ကြပ်တည်း ကြတော့ ဦးဇဉ်းတို့အနေနဲ့ အလှူခံဖို့ဝန်လေးနေပါတယ်၊ လမ်းကလည်း တစ်ဝက် တစ်ပျက်ပဲပြီးသေးတော့ ကျန်တဲ့အပိုင်း နည်းနည်းပြီးပြီးဆိုပြီး၊ ဦးဇဉ်းတို့ကိုယ်တိုင်လည်း စိတ်တူကိုယ်တူ ကိုရင်, ဦးဇဉ်း(၁ဝ)ပါး၊ စေတနာဝန်း ထမ်းကျောင်းသား (၁၅)ယောက်နဲ့ လမ်းပေါ်မှာတဲထိုးနေပြီး လုပ်ကိုင်ကြတယ်။ ဦးဇဉ်းတွေတောင် လုပ်ကြသေး တာဆိုပြီး ပတ်ဝန်းကျင်ရွာတွေက ဒကာ/ဒကာမတွေကလည်း မနေကြပါဘူး။ ဝိုင်းဝန်းပြီး လုပ်အားဒါနတွေပေးကြတာ ကုသိုလ်ရလွန်းလို့ ပျော်လွန်းလို့ဆိုပြီး မိုင်(၃ဝ)လောက်ဝေးတဲ့ရွာတွေကအထိ လုပ်အားဒါနတွေ လာရောက်လုပ် ဆောင်ကြပါတယ်၊။
လုပ်အားဒါန ပြုသူများကလည်း ဒီလိုပဲ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်
ပြီးခဲ့တဲ့ (၁၃၇ဝ)ခု တပို့တွဲလပြည့်နေ့က ထူးထူးခြားခြား လုပ်အားဒါနအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ ဆားလင်းကြီးမြို့နယ် ကံကုန်းရွာကပါ။ ဦးဇဉ်းတို့အနေနဲ့ တာဝန်ကြီးမှာစိုးလို့ လူ(၁ဝဝ)လောက်ပဲ လာကြပါလို့ ကန့်သတ်ထားတဲ့ကြားက တားလို့မရဘဲ လိုက်လာကြတာ လူပေါင်း(၄ဝဝ)ကျော်သွားပါတယ်။ အဲ့ဒီအထဲမှာ ကိုစံဖဲဆိုတဲ့လူတစ်ယောက်က ကျန်းမာရေးမကောင်းဘဲလိုက်လာခဲ့ပါတယ်။ မသေခင် ကုသိုလ်ရဖို့ အရေးကြီးတယ်။ သေလျှင်သေပါစေဆိုပြီး စေတနာထက်သန်စွာနဲ့ ပျော်ပျော်ပဲလိုက်လာခဲ့ပါတယ်။ နေ့လည်(၁၁)နာရီလောက်မှာ ရွာတစ်ရွာကလာလှူတဲ့မုန့်တွေကို သူကိုယ်တိုင်လိုက်ဝေရင်း အပျော်လွန်ပြီး အသက်ရှုရပ်သွားပါတယ်။ ဦးဇဉ်းတို့လည်း ဘာမှမတတ်နိုင်လိုက်ဘူး။ (၁၅)မိနစ်အတွင်းမှာပဲ သေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူ့ရဲ့မိဘ, ဆွေမျိုး,မိတ်ဆွေတွေ အားလုံးကတော့ အများအကျိုးအတွက် ဆောက်ရွက်ရင်း မြတ်သောသေခြင်းနဲ့သေရတာ ဇီဝိတဒါနအသက်လှူရတာဆိုပြီး ကျေကျေနပ်နပ်ဂုဏ်ယူခဲ့ကြပါတယ်။ လမ်းဆရာတော်တွေကိုယ်တိုင် ကိုစံဖဲ ရက်လည်တဲ့နေ့မှာတစ်ကြိမ်၊ (၁၅)ရက်မြောက်မှာ တစ်ကြိမ်၊ ကိုစံဖဲကို ဂုဏ်ပြုပွဲကျင်းပြီး အမျှဝေတိုင် တည်ခဲ့ကြပါတယ်၊ ''ကိုစံဖဲရေ၊ ဒို့ရဲ့ ကိုသိုလ်အမျှ ဝေမှု့ကို လိုအပ်နေတဲ့ ဘဝမျိုးမှာ ရောက်နေရင်လည်း သာဓုခေါ်ပါ၊ တို့လမ်းကြီးအောင်မြင်ဘို့ရာ ခက်ခဲနေပါတယ်။ ကူညီစောင့်ရှောက်နိုင်တဲ့ဘဝမျိုးမှာ ရောက်နေရင်လဲ စွမ်းနိုင်သလို ကူညီပေးပါလို့ တိုင်တည်ခဲ့ကြပါတယ်'' အမျှဝေတိုင်တည်ပြီး လမ်းပြုပြင်ရေး တဲကျောင်းစခန်းကို ပြန်လာခဲ့ပါတယ်။ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် အဲဒီနေ့မှာပဲ ပုထိုးသာရွာသူလေး မမျိုးအေးဆိုတဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်က လှူချင်စိတ်ပေါ်လာလို့ဆိုပြီး သူဆံပင်လေးဖြတ်ရောင်းကာ လမ်းအတွက်ဆိုပြီး လာရောက်လှူဒါန်းခဲ့ပါတယ်။ ဒီမိန်းက လေး လှူတာမြင်ပြီး နောက်နေ့မှာပဲ ပုထိုးသာရွာကအမျိုးသမီး (၄ဝ)ကျော်က တစ်ပြိုင်တည်း ဆံပင်တွေဖြတ်လာပြီး အလှူခံပေးဖို့ တောင်းဆိုလာကြပါတယ်။ တစ်ခြားရွာတွေက အမျိုးသမီးတွေလည်း လှူချင်နေကြတဲ့အကြောင်း လျှောက်ထားကြတော့ ဦးဇင်းအနေနဲ့ စဉ်းစားပေးရပါတော့တယ်။ ဆံပင်တွေ လမ်းတံတားအတွက်လှူတာဟာ ဒါနဥပပါရမီမြောက်လို့ ဘုရားချီးမွမ်းတဲ့ ကုသိုလ်လဲဖြစ်တယ်။ ဒေသနဲ့ တိုင်းပြည်အတွက် အကျိုးသက်ရောက်မှုလည်း ရှိတယ်။ ဘယ်သူ့ပေါ်မှလည်း နစ်နာထိခိုက်မှု မရှိဘူးလို့ သုံးသပ်ပြီး ဆံပင်နဲ့အနည်းဆုံး တံတားတစ်စင်းလောက် ပြီးရမယ်လို့ ယုံကြည်ပြီး ''ရွှေဆံပင်တံတား'' တည်ဆောက်မယ်လို့ ကြေငြာလိုက်ပါတယ်။ ရွှေဆံပင်တံတားလို့ ကြားရတဲ့အခါ ပါရမီဓာတ်ခံရှိတဲ့ အမျိုးသမီးတိုင်း လှူချင်စိတ်ပေါက်ပြီး လှူကြတာ ပုလဲ, ယင်းမာပင်, မုံရွာ, ချောင်းဦး, မန္တလေး, မိတ္ထီလာ စတဲ့မြို့တွေပါ ဆက်တိုက်ပဲ လှူကြတာ အံသြစရာအထိ တွေ့မြင်ခဲ့ကြရပါတယ်။ မုံရွာမှာ ပိဿာချိန် (၁၅ဝ)၊ မိတ္ထီလာမြို့ ပိဿာချိန် (၁၅ဝ)လောက်ရပြီး မန္တလေးမြို့မှာ ပရိယတ္တိသာသနာ့တက္ကသိုလ်က အရှင်ဝါယမာနန္ဒထံမှ အချိန် (၁ဝဝ)ကျော်ရရှိပြီး၊ အထူးသဖြင့် မန္တလေးမြို့၊ မြောက်ပြင် နဂါးပရိယတ္တိစာသင်တိုက် ဆရာတော်နှင့် စာချဆရာတော်များ၊ နဂါးကျောင်းတိုက်မှ ဝေယျာဝစ္စအဖွဲ့များ တစ်လခွဲလောက် ကိုယ့်အလုပ်တွေ ဘေးဖယ်ပြီး အကျိုးဆောင်ပေးကြတာ လူငါးသောင်းကျော်မှ ဆံပင်ပိဿာချိန် (၁၁ဝဝ)ကျော် ရရှိခဲ့ပါတယ်။ ဘယ်သူတွေ ဘာပဲပြောပြော ဆံပင်လှူရတဲ့ ပီတိဟာ အလှူရှင် ကိုယ်တိုင်မှ အသိဆုံးဖြစ်မှာပါ။ တစ်ချို့ဆိုရင် ကြက်သီးမွေးညှင်းထတာတွေ ဝမ်းသာမျက်ရည်ကျတာတွေတောင် တွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။
ကိုစံဖဲအနေနဲ့ ဒီလမ်းကြီးပြီးအောင် စောင့်ရှောက်သလား၊ မစောင့်ရှောက်ဘူးလားတော့ အတိအကျ မပြောနိုင်ပါဘူး။ ကိုစံဖဲတောင် အသက်စွန့်လှူသေးတယ်။ တို့အနေ့နဲ့ ဆံပင်လောက်လှူရတာ ကျေနပ်ပါတယ်၊ လှူသင့်ပါတယ် ဆိုပြီး အိပ်ပျော်နေတဲ့ ပါရမီရှင်တွေရဲ့ သဒ္ဓါ စေတနာ နှလုံးသားကို နှိုးဆွပေးလိုက်တာကတော့ အမှန်ပါပဲ။
အသက်များစွာကယ်တင်ရင်း ဇီဝိတဒါန ရွှေဆံပင်လှူကြတဲ့ ပါရမီရှင်တွေကို ကျေးဇူးတင်သလို၊ ပါရမီရှင်တွေ လှူနိုင်အောင် ကူညီပေးကြတဲ့ ဆရာတော်တွေ၊ ကိုယ်တတ်တဲ့ ပညာနဲ့ ကိုယ်အား၊ ဥာဏ်အား ကူညီပေးနေကြတဲ့ ဝေယျာဝစ္စ အကျိုးဆောင်တွေ အခြေနေမှန်ကို စေတနာရှင်တွေသိခွင့်ရအောင် တင်ပြပေးကြတဲ့၊ သတင်းနဲ့ စာနယ်ဇင်း အဖွဲ့တွေအားလုံးကိုလဲ နယ်သူ၊နယ်သားအားလုံးရဲ့ ကိုယ်စား အထူးဘဲ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ဒီလမ်းပိုင်းမှာ အရှည်(၁၅)မိုင်နဲ့ တံတား(၁၇)စင်းပါဝင်ပါတယ်။ ဝမ်းသာစရာပြောချင်တာက အခုကျောက်လမ်း ဆယ်မိုင်နဲ့ တံတား(၁ဝ)စင်း ပြီးခဲ့ပါပြီ။ အဲ့ဒီလောက်ပြီးတာလေးတောင်မှ အခုနှစ်မိုးတွင်းကာလမှာ အရေးပေါ်လူနာ (၁၃)ယောက်ကို ဦးဇင်းတို့ ကိုယ်တိုင် လမ်းသုံးကားများနဲ့ အချိန်မှီ ဆေးရုံပို့ပြီး အသက်ကယ် တင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါလဲ ရွှေဆံပင်းတံတားလမ်း ကုသိုလ်ရှင်များရဲ့ ကျေးဇူးတွေပါပဲ။
နိဂုံးချုပ်အနေနဲ့ ပြောချင်တာကတော့ ၊ ဆံပင်အလှူရှင်နဲ့ ပတ်သက်လို့ နောက် ဆုံးသတင်းထူးပါပဲ။ ပြီးခဲ့တဲ့ ၁၂.၁၁.၂ဝဝ၉ နေ့က မုံရွာအထက် မင်းကင်းမြို့အနီး ချင်းတွင်းမြစ်ထဲမှာ မြစ်ရေယာဉ်တစ်စင်း တိမ်းမှောက်ပြီး လူ(၇ဝ)လောက် သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီစက်လှေပေါ်မှာ ခရီးသည်အမျိုးသမီး တစ်ယောက်ဟာ ရေနစ်လို့ အော်ကြ၊ မြုပ်ကြတာတွေကြည့်ပြီး ''ငါလည်း ရေမကူတတ်ဘူး၊ သေရတော့မယ်၊ ငါ့မှာ အားကိုးစရာဘာများရှိသလဲလို့၊ စဉ်းစားလိုက်တာ မကြားသေးခင်က မုံရွာမြို့ ရွှေဒေါင်းယာဉ် သင်္ကန်းတိုက်မှာ ရွှေဆံပင်လမ်းတံတားအတွက် ဆံပင်လှူခဲ့တယ်၊ ငါသေရပေမဲ့ င့ါဆံပင်လေးကတော့ ခက်ခဲပင်ပန်းစွာ သွားလာကြရတဲ့လူတွေအတွက် လမ်းတံတားကုသိုလ်ပြုခဲ့ရပြီလို့'' တွေးမြင်ရင်း ဝမ်းသာသွားပါတယ်။ အဲ့ဒီအချိန်မှာ မမျှော်လင့်ဘဲ ကွမ်းခြင်းတောင်းတစ်လုံးပေါ်လာပြီး ဖက်တွယ်လိုက်ပါသွားရင်း အသက်ရှင်လာခဲ့ရပါတယ်။ ဆံပင်နဲ့ လမ်းတံတား ကုသိုလ်ပြုရတဲ့ အကျိုးဆိုပြီး ဝမ်းသာနေရှာပါတယ်။ ဒါကြောင့် ရွှေဆံပင်တံတားလမ်းအတွက် လှူတဲ့သူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်၊ မိမိတတ်စွမ်းရာကုသိုလ်လုပ်အားဒါနနဲ့ဖြစ်ဖြစ် ပါဝင်စေချင်ပါတယ်။ ဒီကုသိုလ်တွေကြောင့် ဘဝခရီးလမ်း၊ သံသရာ ခရီးလမ်း၊ နိဗ္ဗာန်ခရီးလမ်းမှာ ဖြောင့်ဖြူးသာယာပြီး ပန်းခင်းသောလမ်း လျှောက်လှမ်းရသလို မဂ်လမ်း၊ ဖိုလ်လမ်း၊ နိဗ္ဗာန်လမ်း ဖြောင့်ဖြူးသာယာစွာ သွားနိုင်ကြပါစေလို့ ဆန္ဒပြုရင်း နိဂုံးချုပ်ပါတယ်။
(ရွှေဆံပင်တံတားလမ်းနှင့် ပတ်သက်၍ အသေးစိပ်သိရှိလိုပါက မည်သူမဆို လွတ်လပ်ပွင်လင်းစွာ စုံစမ်း နိုင်ပါကြောင်းနှင့် ဆရာတော်တို့နှင့် အတူ လက်တွဲပြီး ဆောင်ရွက်လိုပါကလည်း မည်သူကိုမဆို ကြိုဆိုဖိတ် ခေါ်ပါကြောင်း အသိပေးကြေငြာအပ်ပါတယ်။)
မုံရွာခရိုင် / ဖုံး- ဝ၉၆၄၅ဝ၆၅၄
မှတ်ချက်။ ။ ၅-၁၂-၂ဝဝ၉ရက်နေ့တွင်၊ လမ်းတံတားပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး(အကျိုးတော်ဆောင်)ဆရာတော် အရှင်ဝေပုလ္လမှ၊ ရန်ကုန်မြို့၊ ကမ္ဘာအေး၊ တိပိဋကမဟာဂန္ဓာရုံကျောင်းတိုက်အတွင်း၊ ပထမအကြိမ် ကျင်းပပြု လုပ်အပ်သော၊ စုပေါင်းရေစက်ချ အခန်းအနား တွင် ပြောကြားခဲ့သော၊ စကားရပ်များဖြစ်ပါသည်။
ပို့စ်တင်သူ-မောင်မင်းစိုး Min Soe အချိန် 2:31 AM
အွန်လိုင်း အခမဲ့ အင်္ဂလိပ်စာ
ပိဋကတ်သုံးပုံကို မြန်မာလို ဖတ်ချင်သူများအတွက်
အားကစားသတင်းများကို ကြည့်လိုလျှင် အောက်ကို ကလစ်လိုက်ပါ။
အားကစားချစ်သူများဆုံဆည်းရာ ESPN ESPN livescore dvbsports eleven ဂျာနယ်များ myanmargoal world soccer news soccernews foxsports worldsoccer teamtalk guardian fifa soccer europe skysports
သတင်းမီဒီယာများ Burma Lawyers' Council BBC Homepage DVB BBCBurmese RFA VOA YAMC Mizzima ယနေ့ မြန်မာ ရိုးမ ၃ သစ္စာ ဟစ်တိုင် ဧရာဝတီ ခေတ်ပြိုင် မြန်မာတီးရှော့(ပ်) မိုးမခ BBC Learning
Myanmar Conceptual Poets Station
စာအုပ်ကို လိုချင်လျှင် ပုံပေါ်ကို နှိပ်ပါ။ .
စာပေဟောပြောပွဲ mp3 ဖိုင်အပုဒ်( ၁၀၀ကျော် )
ကျော်မြသန်းစာအုပ်များ (၂ အုပ်)
ကျော်အောင်စာအုပ်များ (၂ အုပ်)
ကာတွန်း တင်အောင်နီ (ပြာဂလောင်ပြာလချောင်) စာအုပ်များ (၉ အုပ်)
ကောင်းထက်စာအုပ်များ (၂ အုပ်)
ကျော်ဝင်းစာအုပ်များ (၁၂ အုပ်)
ကိုတာစာအုပ် (၅ အုပ်)
ကျော်ငြိမ်းစာအုပ် (၁ အုပ်)
ကျားပေါက်စာအုပ် (၁ အုပ်)
ကြူမွှေး စာအုပ်များ (၄ အုပ်)
ကြည်ဦးစာအုပ်များ (၃ အုပ်)
ကင်းဝန်မင်းကြီးပြင်သစ်နိုင်ငံသွားမှတ်တမ်း (၁ အုပ်)
ကိုပေါက် (ဖုန်းနည်းပညာ) စာအုပ် (၁ အုပ်)
ခင်ဆွေဦးစာအုပ်များ (၃ အုပ်)
ခင်နှင်းယုစာအုပ်များ (၁၃ အုပ်)
ခင်မောင်ဇော်စာအုပ် (၁ အုပ်)
ခင်မောင်ညို (ဘောဂဗေဒ)စာအုပ်များ (၃ အုပ်)
ချစ်စံဝင်း၏စာအုပ်များ ( ၁၉ အုပ်)
ချစ်စိန်လွင် (သမိုင်း) (၁ အုပ်)
ခိုင်ကျော် (ဂီတ) စာအုပ်များ (၄ အုပ်)
ဂျူး၏ ၀တ္ထုစာအုပ်များ (၅၈ အုပ်)
ဂန္ဓရီဝိဇ္ဖာ စာအုပ် (၁ အုပ်)
ဂမ္ဘီရလောက မဂ္ဂဇင်းများ (၃ အုပ်)
ဂီတမှူး P Morgan စာအုပ် ( ၁ အုပ်)
စာပေဟောပြောပွဲ mp3 ဖိုင်(စာရေးဆရာများ) အပုဒ်၁၀၀ ကျော်
စောငုဝါ (ကျမ်းမာရေး) စာအုပ် (၁ အုပ်)
စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင်စာအုပ်များ (၂ အုပ်)
စိမ့်(ပညာရေး)စာအုပ် (၁ အုပ်)
စက္ကောမ(မျက်လှည့်) စာအုပ်များ ( ၂ အုပ်)
ဆုထူးပန်ဦးကျော်စာအုပ် (၁ အုပ်)
ဆန်းလွင်စာအုပ်များ (၉ အုပ်)
ဆွေမင်း-ဓနုဖြူ (တွက်ပီ) စာအုပ်များ (၁၅ အုပ်)
ဇာဂနာစာအုပ် (၁ အုပ်)
ဇော်ဇော်အောင်စာအုပ်များ (၆ အုပ်)
ဇေယျစာအုပ် (၁ အုပ်)
ညိုမြ(သမိုင်း)စာအုပ် (၁ အုပ်)
တက္ကသိုလ်နေ၀င်းစာအုပ်များ (၅ အုပ်)
တက္ကသိုလ်စိုးမိုးနိုင်စာအုပ်များ (၂ အုပ်)
တင်သန်းဦးစာအုပ် (၁ အုပ်)
တက်တိုးစာအုပ်များ ( ၅ အုပ်)
တိုက်စိုးစာအုပ်များ (၂ အုပ်)
တင်မိုး(ကဗျာ)စာအုပ် (၆ အုပ်)
တင်စိုး (ဘောဂဂုဏ်)စာအုပ် ( ၁အုပ်)
တော်ဘုရားလေးအောင်ဇေစာအုပ်များ (၂ အုပ်)
ထူးဆွေအောင်စာအုပ်များ (၅ အုပ်)
ထက်အောင်ဇင်(ဘာသာစကားဆိုင်ရာ) စာအုပ် (၂ အုပ်)
ထင်လင်းစာအုပ်များ (၄ အုပ်)
ဒဂုန်တာရာ၏စာအုပ်များ (၉ အုပ်)
ဒေါင်းနွယ်ဆွေစာအုပ် (၁ အုပ်)
ဒေါက်တာခင်လေးမြင့်(ဘာသာပြန်) (၁ အုပ်)
ဒေါက်တာမင်းတင်မွန်စာအုပ်များ (၂၁ အုပ်)
ဒေါက်တာနိုက်တင်ဂေးလ်(ကျမ်းမာရေး)စာအုပ် (၁ အုပ်)
ဒေါက်တာ သန်းထွန်း စာအုပ် (၁၃အုပ်)
ဒေါက်တာရဲမြင့်ကျော် (ကျမ်းမာရေး)စာအုပ် (၁ အုပ်)
ဒေါက်တာအေးကျော်(ကျမ်းမာရေး)စာအုပ် (၂ အုပ်)
ဒေါက်တာကျော်မြင့်(ကျမ်းမာရေး)စာအုပ် (၁ အုပ်)
ဒေါက်တာမြတ်မြင့်မို(ကျမ်းမာရေး)စာအုပ် (၁ အုပ်)
ဒေါက်တာမြင့်မြင့်ခင်(ဟင်းချက်နည်း(စာအုပ် (၁ အုပ်)
ဒေါက်တာမျိုးအောင် (ငါးဘာသာစကားပြော) စာအုပ် (၁ အုပ်)
ဓူဝံစာအုပ် (၁ အုပ်)
ဓမ္မာစရိယ ဦးဌေးလှိုင်စာအုပ်များ (၁၆ အုပ်)
နီကိုရဲ စာအုပ်များ(၄၂ အုပ်)
နတ်နွယ်စာအုပ်များ (၈ အုပ်)
နိုင်ပန်းလှ (သမိုင်း)စာအုပ် (၁ အုပ်)
နေ၀င်းမြင့်စာအုပ်များ ( ၆ အုပ် )
နန်းစမ်းစမ်းအေး (ဟင်းချက်နည်း) စာအုပ်(၁ အုပ်)
ပါရဂူ၏ စာအုပ်များ (၂၅ အုပ်)
ပုညခင်၏စာအုပ်များ (၂၃ အုပ်)
ပီမိုးနင်းစာအုပ်များ (၆ အုပ်)
ပြည့်ပိုင်မှူးအိမ်စာအုပ်များ (၁၉ အုပ်)
ဖိုးကျော့၏စာအုပ်များ (၉ အုပ်)
ဖိုးဝမောင် (အော်စလို)စာအုပ်များ (၂ အုပ်)
ဖွားလောက်ကြီး စာအုပ် (၁ အုပ်)
ဗန်းမော်တင်အောင်စာအုပ်များ (၃ အုပ်)
ဗိုလ်မှူးကြီးဟောင်းတင်မောင်စာအုပ်များ (၂ အုပ်)
ဗိုလ်မှုးချုပ်ဟောင်းကျော်ဇော စာအုပ်များ ( ၅ အုပ်)
ဗိုလ်တာရာ(ရဲဘော်သုံးကျိပ်ဝင်) စာအုပ်များ (၃ အုပ်)
ဘုန်းပြည့်တေဇာ စာအုပ် (၁ အုပ်)
မဟာဆွေစာအုပ်များ (၄ အုပ်)
မောင်မောင် (ရွှေကရ၀ိတ်)စာအုပ် (၁ အုပ်)
မောင်သာချိုစာအုပ်များ (၂ အုပ်)
မောင်မြင့်ကြွယ် စာအုပ် (၁ အုပ်)
မောင်စွမ်းရည် စာအုပ် (၁ အုပ်)
မောင်သွေးချွန်စာအုပ် (၁ အုပ်)
မောင်ဆုရှင်စာအုပ် (၉ အုပ်)
မောင်ထွန်းသူစာအုပ်များ (၂၂ အုပ်)
မောင်ဝဏ္ဏ(သမိန်ပေါသွပ် ကာတွန်း)စာအုပ်များ (၈ အုပ်)
မိုးဝေ(စုံထောက်)စာအုပ်များ (၂ အုပ်)
မြ၀င်း (လက်ဝှေ့)စာအုပ် (၁ အုပ်)
မြေလတ်မောင်မြင့်သူ (ကျမ်းမာရေး) စာအုပ် (၁ အုပ်)
မိုးမိုး(အင်းလျား)၏စာအုပ်များ (၁၃ အုပ်)
မောင်ချောနွယ်(ကဗျာ)စာအုပ်များ (၅ အုပ်)
မောင်ကောင်းထိုက် (ဟာသ)စာအုပ်များ (၄ အုပ်)
မောင်းထောင်ဦးကျော်လှ (ကဗျာ)စာအုပ် (၁ အုပ်)
မြေယာဥပဒေစာအုပ် (၁ အုပ်)
မြင့်သန်းစာအုပ်များ (၈ အုပ်)
မင်းစံအိမ် (ကျမ်းမာရေး)စာအုပ် ( ၁ အုပ်)
မင်းဒင်စာအုပ် (၁ အုပ်)
မင်းမြတ်သူရ၏စာအုပ်များ (မသိ အုပ်)
မင်းသော်တာ (စိုက်ပျိုးရေး)စာအုပ် (၁ အုပ်)
မောင်မြတ်မိုးစာအုပ် (၁ အုပ်)
မောင်ကိုနီ (တရားရုံးချုပ်ရှေ့နေ)စာအုပ် (၁ အုပ်)
မင်းကိုနိုင်စာအုပ် (၁ အုပ်)
မြန်မာသတင်းထောက်များလက်စွဲစာအုပ် (၁ အုပ်)
ရောင်ပြန် မဂ္ဂဇင်း (၁ အုပ်)
ရဲစတိုင်းစာအုပ် (၁ အုပ်)
ရဝေနွယ် (အင်းမ) စာအုပ်များ (၈ အုပ်)
လယ်တွင်းသားစောချစ်၏စာအုပ်များ (၇ အုပ်)
လင်းညှို့သွေးစာအုပ်များ (၆ အုပ်)
လွန်းထားထား(ဆေးတက္ကသိုလ်)၏စာအုပ်များ (၁၇ အုပ်)
လွင်မင်းအံ့စာအုပ်များ (၅ အုပ်)
လူထုစိန်ဝင်းစာအုပ်များ (၈ အုပ်)
လူထုဒေါ်အမာစာအုပ်များ (၆ အုပ်)
လင်းယုန်မောင်မောင်စာအုပ်များ (၆ အုပ်)
လုလု (ဟင်းချက်နည်း) စာအုပ်
၀င်းနိုင်ဦး(ရေနံ) (ဘာသာပြန်) စာအုပ် (၁ အုပ်)
၀င်းတင့်ထွန်းစာအုပ် (၄ အုပ်)
၀င်းမြင့်(ရွှေပညာဆိုင်ရာ)စာအုပ် (၁ အုပ်)
ဝေယံလင်းခေါင်စာအုပ်များ (၂ အုပ်)
၀ါဝါ (ဘာသာစကားဆိုင်ရာ) စာအုပ် (၁ အုပ်)
သတိုးတေဇ၏စာအုပ်များ (၁၄ အုပ်)
သာဓုစာအုပ် (၁ အုပ်)
သုသုက စာအုပ် (၁ အုပ်)
သုခ(ဦးသုခ)စာအုပ်များ (၆ အုပ်)
သုတေသီမြင့်ထွန်းစာအုပ်များ (၂ အုပ်)
သစ္စာနီစာအုပ်များ (၈ အုပ်)
သိုးဆောင်းစာအုပ်များ (၁၉ အုပ်)
သိန်းဖေမြင့်စာအုပ်များ (၈ အုပ်)
သိန်းအေးစာအုပ် (၁ အုပ်)
သန်းမြင့်ဦးစာအုပ် (၁ အုပ်)
သုန္ဒရီသက်ဝေစာအုပ်များ (၂ အုပ်)
ဟိန်းဇေစာအုပ်များ (၃ အုပ်)
အရိုးစာအုပ်များ (၃ အုပ်)
အံ့မောင်စာအုပ် (၁ အုပ်)
အောင်ခန့်စာအုပ်များ (၅ အုပ်)
အလိမ္မာ (ဂီတ) စာအုပ်များ (၃ အုပ်)
အောင်စောဦးစာအုပ် (၁ အုပ်)
အောင်လင်း(Video တည်းဖြတ်နည်း)စာအုပ် ( ၁ အုပ်)
အိပ်မက်အမျိုးမျိုးနှင့်အသားလှုပ်နိမိတ်စာအုပ် (၁ အုပ်)
အရှင်ဇ၀န(မေတ္တာရှင်-ရွှေပြည်သာ) စာအုပ်များ (၂၆ အုပ်)
ဦးကြည့်မြင့်(စီးပွားရေး)စာအုပ် (၁ အုပ်)
ဦးဖိုးကျား စာအုပ် (၃ အုပ်)
ဦးဘုန်း(ဓါတု) စာအုပ်များ (၂ အုပ်)
ဦးလှဒင်(မြန်မာပြန်) စာအုပ် (၁ အုပ်)
ဦးလှဝင်း-လေသရဲတစ်ဦးစာအုပ် (၁ အုပ်)
ဦးမောင်မောင်တင် (မဟာဝိဇ္ဖာ) စာအုပ်များ (၂ အုပ်)
ဦးဣန္ဒောဘာသ (၀ါကျကျမ်း) စာအုပ် (၁ အုပ်)
ဦးဘိုသိန်း (ဗေဒင်)စာအုပ် (၁ အုပ်)
ဦးအဂ္ဂ (ဘာသာစကား) စာအုပ် (၁ အုပ်)
ဦးသိန်းမောင် (ဘာသာစကား) စာအုပ်များ (၁ အုပ်)
စိုးမင်းအောင် (ပြုလုပ်သည် ပြုလုပ်သည်)
ငါကိုယ်တိုင် မရေးဖြစ်တဲ့ ငါ့ပုံတူ
ငါ့မွေးနေ့ အမှတ်တရ ကဗျာဆရာများ၏ ကဗျာများ
youth and leadership (11)
youth ang policy (5)
ဘာမှတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ အိုင်တီခေတ်ကြီးထဲမှာ ဒီအတိုင်းပဲ ထိုင်နေလို့ မဖြစ်တော့တာနဲ့ ဒီဆိုက် လေး ဖွင့်ပြီး ပြောချင်တာလေးတွေကို ရင်ဖွင့် လိုက်တာပါ။
ပြောချင်တာလေးတွေ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပေါ့ ထားခဲ့ပါလား
မြန်မာပြည်တွင်းအွန်လိုင်းအင်္ဂလိပ်စာ 4scale ဖြေဆိုနိုင်သောဝက်ဆိုက်
ရေးဖတ်ပြော အင်္ဂလိပ်စာသင်ခန်းစာများ အခမဲ့ လေ့လာနိုင်တဲ့
မြန်မာပြည်တွင်း အွန်လိုင်းအင်္ဂလိပ်စာ 4scale ဖြေဆိုနိုင်သောဆိုက်ပါ
အင်္ဂလိပ်စာ IELT စာမေးပွဲဆိုင်ရာဝက်ဆိုက်
နိုင်ငံတကာအခမဲ့ Network စာမေးပွဲအကြောင်း ပါသောဝက်ဆိုက်
ပြည်ပမှတက္ကသိုလ်များကို onlineမှတက်ရောက်နိုင်ရန်ကြည့် ရှု နိုင်သောဆိုက်
နိုင်ငံခြားမှာ ပညာသင်နေတဲ့ ကမ္ဘာ့လူငယ်ကျောင်းသားများ အတွက် ဝက်ဆိုက်
နိုင်ငံရပ်ခြားပညာသင်ကြားလိုသူများအတွက် ပညာသင်ဆုများ အကြောင်းဝက်ဆိုက်
တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းအောင်ပြီးသူများ ကိုရီးယားပညာသင်ဆု လျောက်နိုင်သောဝက်ဆိုက်
နိုင်ငံ၏ wlc ကောလိပ်၏ဝက်ဆိုက်ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာလမ်းညွှန့်များ
ကလေးတစ်ယောက်ကုို အရွယ်ရောက်တဲ့အထိပြုစုပျိုးထောင်တဲ့ လမ်းညွှန်ချက်တွေပါတဲ့ဝက်ဆိုက်
ယဉ်ကျေးမှု၊ဘာသာရေးပညာရေးနယ်ပယ်အသီးသီးမှရေးသားချက်တွေကို အသံဖိုင်အဖြစ် ပြောင်းပေးထားတဲ့ဆိုက်
အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားတွင် quotationများကြောင့်မူလအဓိပ္ပါယ်နှင့် လွဲချော်သွားသည်များကိုစုစည်းဖော်ပြပေးသည့်ဝက်ဆိုက်
ရှေးဦးလူသားများ၏ အနုပညာလက်ရာများနှင့် ပန်းချီ၊စိုက်ပျိုးရေးသုံးပစ္စည်းများဖော်ပြထားသောဝက်ဆိုက်
ဓါတ်ပုံဝါသနာရှင်များနှင့် သမိုင်းလေ့လာသူများ အတွက်စိတ်ဝင်စားဖွယ်အထောက်များပါသောဝက်ဆိုက်
အင်္ဂလိပ်စာလုံး အတိုကောက်တွေ လေးသန်းကျော်ကိုဖော်ပြပေးထားတဲ့ဝက်ဆိုက်
နိုင်ငံတကာလူအမျိုးမျိုးရဲ့ အမူအရာ ဝတ်စားဆင်ယင်မှုတွေအကြောင်းတင်ပြထားတဲ့Blogတစ်ခု
ဂူဂဲလ်၊ ဝီကီပီးဒီးယား၊ အဘိဓာန်၊ စွယ်စုံကျမ်း၊ဘာသာပြန်၊ ယူနစ်ပြောင်းတဲ့အလုပ်တွေလုပ်နိုင်တဲ့ဆိုက်
အင်္ဂလိပ်ဘာသာ နောက်ဆုံးပေါ်အသုံးတွေ၊ အင်တာနက်ဘန်းစကားတွေ၊စကားစုတွေအကြောင်းသိနိုင်တဲ့ဆိုက်
စစ်တုရင်ကစားနည်းစည်းမျဉ်းတွေ လေ့လာနိုင်၊ ကွန်ပျူတာနဲ့လည်းကစားနိုင်တဲ့ဝက်ဆိုက်
အစစ်နဲ့ ခွဲမရအောင်တူတဲ့ဓာတ်ပုံတွေ ဖန်တီးပုံ ဖန်တီးနည်းကိုရေးသားထားတဲ့ဝက်ဆိုက်ပန်းချီပညာရပ်ဆိုင်ရာလမ်းညွှန့်
ဘီစီ ၈၀၀၀ ကနေဒီနေ့အထိကမ္ဘာ့သမိုင်းဝင်ဓာတ်ပုံများကိုဖော်ပြထားတဲ့ဝက်ဆိုက် အမှတ်(၁)
ကမ္ဘာ့အံ့ဖွယ်အဆောက်အအုံနေရာတွေ အရာတွေကိုနှစ်စဉ်ရွေးချယ်ဖော်ပြပေးတဲ့ဝက်ဆိုက် အမှတ်(၄)
ရေးဖတ်ပြော အင်္ဂလိပ်စာသင်ခန်းစာများ အခမဲ့ လေ့လာနိုင်တဲ့ဝက်ဆိုက်
နိုင်ငံ၏ wlc ကောလိပ်၏ဝက်ဆိုက်
အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားတွင် quotationများကြောင့်မူလအဓိပ္ပါယ်နှင့် လွဲချော်သွားသည်များကို စုစည်းဖော်ပြပေးသည့်ဝက်ဆိုက်
ဘီစီ ၃၀၀၀ကာလဂရိဘုရားကျောင်းတွေကအစယခုခေတ်ထိအဆောက်အအုံ၁၀၀၀ကျော်ကို ပြထားသည်
အစစ်နဲ့ ခွဲမရအောင်တူတဲ့ဓာတ်ပုံတွေ ဖန်တီးပုံ ဖန်တီးနည်းကိုရေးသားထားတဲ့ဝက်ဆိုက်
ကမ္ဘာ့မြို့ကြီးပေါင်း ၄၀၀၀ကျော်ရဲ့ အကြောင်းကို ဖော်ပြထားတဲ့ဆိုက်ပါ
ဘီစီ ၈၀၀၀ ကနေဒီနေ့အထိကမ္ဘာ့သမိုင်းဝင်ဓာတ်ပုံများကိုဖော်ပြထားတဲ့ site ပါ
ကမ္ဘာ့နိုင်ငံပေါင်းစုံရဲ့လူမှုရေး ၊စီးပွားရေး၊ ကျန်းမာရေး ၊ပထဝီဆိုင်ရာပေါင်းစုံဖေါ်ပြပေးထားတဲ့ဆိုက်
ဘီစီ ၈၀၀၀ ကနေဒီနေ့အထိကမ္ဘာ့သမိုင်းဝင်ဓာတ်ပုံများကိုဖော်ပြထားတဲ့ဝက်ဆိုက်
မန္တလေး လမ်းညွှန်စာအုပ်ရဲ့ site
ဆက်သွယ်ရန် အီးမေးလ်လိပ်စာနှင့် ရယ်စရာမဂ္ဂဇင်းသို့ စာမူပေးပို့လိုလျှင်.....
Gmail. mgminsoe777@gmail.com yisayar.magazin@gmail.com facebook- http://www.facebook.com/mg.minsoe http://www.facebook.com/Yi Sa Yar
*ပုလဲတစ်ကန့်၊ရွဲတစ်သန့် *ဂလိုဘယ်လူငယ်များနှင့်စကားပြောခြင်း လူငယ်နဲ့လောကဓံ လူငယ်နဲ့ခေါင်းဆောင်မှု ဗုဒ္ဓ၏သင်ကြားချက်များ မရူးလွင့်ရန်လေ(ကဗျာ) မနေရလို့ သေရတဲ့အခါ လူငယ်တွေရဲ့အသံနှင့် ခေါင်းဆောင်မှုရှာပုံတော် လူငယ်နဲ့အပြောင်းအလဲ စူပါကိုရင်လေးများ(၁) စူပါကိုရင်လေးများ(၂) လူငယ်နဲ့အရွေ့ လူငယ်နဲ့ လူလည် ရောင်စုံရုပ်ကြွင်း(ကဗျာ) အကြောင်းအရာထုံထိုင်းမှုရောဂါ(ကဗျာ) အလှူပေး၍ သူဌေးဖြစ်ခဲ့သူများ အမွန်မြတ်ဆုံးအလှူ
စာအုပ်လိုချင်လျှင် ပုံပေါ်ကို ကလစ်ပါ။
ဂလိုဘယ် လူငယ်များနှင့် စကားပြောခြင်း
စာအုပ်လိုလျှင် ပုံပေါ်ကို ကလစ်ပါ။
စာအုပ်လိုချင်လျှင် ပုံပေါ် ကလစ်ပါ။
မကြာခင်က ထွက်ရှိခဲ့သည့် စာအုပ်
စာအုပ်ကို ရယူလိုလျှင် ပုံပေါ်ကို ကလစ်ပါ။
အုပ် ၀ါသနာအိုးတွေ အတွက် .. ဖတ်ချင်သမျှ စာအုပ်အားလုံးနီးပါးဖတ်ရမယ် သူများတွေကိုလဲ မျှဝေပေးစေချင်တယ်
ဦးဦးစိုးပြောတဲ့ ပုံပြင်များ အဆက်
အဆိပ်သင့်ဘ၀ အမှတ်စဉ်(၁၂) --------------------------- တစ်ခါက ရွာတစ်ရွာမှာ ကိုစံငြိမ်းဆိုတဲ့ လူတစ်ယောက်ရှိတယ်။ သူ့မှာ ညီအစ်ကို လေးေ...
“သမီးကို မိဘတွေက ကျောင်းဆက်မထားနိုင်တော့တဲ့ အဖြစ်ဆိုတော့ လူပွဲစားကလည်း ရပ်ကွက်ထဲမှာ ထိုင်းကို သွားပြီး အလုပ်လုပ်ဖို့ မက်လုံးပေးစည်းရုံးတာကို...
ရောင်စုံ... ရောင်စုန်း... ရောင်စုံ... ရောင်စုန်း
လွတ်လပ်မှုကို အာခေါင်ထဲက ထွေးချလိုက်ပြီ မသိတော့ ခံလိုက်ရ အဲဒါကြောင့် ပုရွက်ဆိတ်ကို ဆင်က ချီ ဥပမာကွာ ဘာဖြစ်တော့ ဘာဖြစ်သလဲ ငိုတဲ့ မျက်ရည်တေ...
သူတော်စင်ကြီး ဂျာမိန်းရဲ့ ကတိ အမှတ်စဉ်(၁) တစ်ခါက ဂျာမိန်းဆိုတဲ့ သူတော်စင်တစ်ယောက် ရှိခဲ့ဘူးတယ်။ သူ့အနေနဲ့ ထူးခြား ချက်ကတော့ ဆေးပညာမှာ...
နာယကဂုဏ် (၆) ပါး
နာယကဂုဏ် ခြောက်ပါးဆိုသည်ကတော့ လူအတော်များများသိပြီးလည်း ဖြစ်ပါသည်။ သို့သော်ဤသည်လည်း အရေးကြီး သည့်အတွက်ကြောင့် ပုံသာဓကအနည်းငယ်ထုတ်နုတ်ပြီး ...
လူငယ်နဲ့ အချစ် ဒီကိစ္စကကိုတော့ ပြောဖို့ရန် တော်တော်လေးတော့ ဝန်လေးမိပါတယ်။ တစ်လမ်းသွားစနစ်နဲ့ မောင်းနှင် ခဲ့တော့ ဒါမျိုးတွေက ထိတွေ့မှုနဲ့ြေ...
နံ့သာကုန်းရွာ၊ကမ္ဘာ့ရန်ကင်းကျောင်းဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ သက်တော်(၇၅)နှစ်ပြည့် စိန်ရတုမွေးနေ့ ဂုဏပူဇာပွဲ စည်ကားစွာ ကျင်းပပြီးစီး
ခန့်ငြားထည်ဝါသော စိန်ရတု ဂုဏပူဇာအထိမ်းအမှတ် ဆိုင်းဘုတ်မုခ်ဦးကြီး အကျိူးတော်ဆောင် ရပ်ရွာလူငယ်များအဖွဲ့ အလှူငွေ လက်ခံ...
အလုပ်ရှာဖွေရေး အေးဂျင့်တခုလျှင် လုပ်သား ၃ဝဝ ပို့ဆောင်ရန် လျာထား
နယူးဒေလီ။ ။ အလုပ်သမား ဝန်ကြီးဌာနတွင် တရားဝင် မှတ်ပုံတင်ထားသည့် ပြည်ပ အလုပ်အကိုင် ရှာဖွေရေး အေဂျင်စီများအား တနှစ်အတွင်း မြန်မာ အလုပ်သမားဥ...
သားသားမီးမီးတို့ရေ မင်္ဂလာပါ။ ဦးဦးစိုး သားသား မီးမီးတို့အတွက် ဆင်ခြင်ဖို့၊ လိုက်နာဖို့၊ အတုယူဖို့၊ သင်္ခန်းစာ ယူနိုင်ဖို့အတွက် ပုံပြင်လေးေ...
Valentine’s day -ချစ်သူများနေ့ ဆိုသည်မှာ
အေဒီ ၂၇၀ ခုမှာ ရောမဟာ Claudius-II ဆိုတဲ့ ဘုရင်အုပ်ချုပ်နေခဲ့တယ်။ သူဟာ တိုင်းသူ၊ပြည်သားတွေအပေါ်မှာ လက်ထပ်ထိမ်းမြားခြင်းနှင့် ပတ်သက်ပြီး...